Lahatsoratra momba an'i Irak
Ahoana ny fomba hahazoana visa ho an'i Irak?
Aprily 18, 2022 Demi Irak, visa
Amin'ity lahatsoratra ity dia ho fantatrao fa ny fomba fangatahana visa Irak. Inona no takiana amin'ny fangatahana visa raharaham-barotra, visa fizahantany? Maharitra hafiriana ny fahazoana fidirana Irak, ary amin'ny fomba ahoana
Sekoly any Irak
March 25, 2022 Demi Irak, am-pianarana
Eo ambany fanaraha-mason'ny governemanta Irakiana iray manontolo ny rafi-panabeazana ao Iraka. Manomboka amin'ny ambaratonga voalohany ka hatramin'ny diplaoma, misy ny fampianarana ho an'ny daholobe maimaim-poana. Misy institiota fampianarana tsy miankina any Irak. Fa ny saran'ny fanatrehana azy ireo no mahatonga
Ahoana ny fomba hahazoana asa any Irak?
Janoary 10, 2022 Shubham Sharma Irak, asa
Irak dia manan-karena amin'ny lova, poeta malaza, mpanao hosodoko ary mpanao sary sokitra tsara indrindra any Arabo. Raha mikasa ny hifindra any Iràka ianao, aloha dia tokony hizaha ny fomba fangatahana visa Irak. Ity no dingana voalohany; rehefa
Visa any Torkia ho an'ny Iraqis
Aogositra 27, 2021 Shubham Sharma Irak, Travel, vorontsiloza, visa
Repoblikan'i Torkia, fantatra amin'ny anarana hoe Repoblikan'i Torkia, dia firenena mipetraka eo amin'ny sampanan-dalan'i Eropa sy Azia. Ny renivohiny sy ny tanàna lehibe indrindra, Ankara, no tanàna lehibe indrindra any Torkia. Vokatr'izany dia mizara sisintany amin'i Gresy izy
Visa any Iràka ho an'ny karana
Oktobra 28, 2020 Demi Indiana, Irak, visa
Ny visa any Iràka dia fanamafisana mamela ny teratany karana hanana tanjona samihafa hiditra ao amin'ny firenena. Mba hidirana any Irak, mitaky fahazoan-dàlana ny teratany avy amin'ny ankamaroan'ny firenena. Na izany aza, firenena Arabo vitsivitsy no manana fidirana tsy misy visa,
Ny rafitry ny rafi-pitaterana any Irak
Febroary 17, 2020 Demi mandehana, Irak
Ny rafitry ny fitaovam-pitaterana any Irak dia mora ary malefaka. Afaka mahita azy na aiza na aiza izy io. Ny Irak dia miankina amin'ny antsointsika hoe nafarat1 izay mampiseho fivondronan'ny minibusses maromaro anaty garazy, garazy lehibe, izay mandeha fiara.
Hopitaly tsara indrindra ao Iràka
Febroary 13, 2020 Shubham Sharma fahasalamana, Irak
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, Iraq dia namolavola rafi-pitsaboana afovoany sy manerantany. Tamin'ny taona 1970, nanomboka nampiasa modely ho an'ny fitsaboana ara-pahasalamana miorina amin'ny hopitaly izy ireo. Irak, tsy toy ny firenena mahantra hafa, izay nifantoka tamin'ny fikarakarana ara-pahasalamana faobe
Hotely mihaja indrindra any Irak
Febroary 12, 2020 Demi trano fandraisam-bahiny, Irak
Irak dia tanàna misy toerana masina taloha, be tendrombohitra ary be fofonaina tendrombohitra. Izy io dia iray amin'ny firenena voalohany nananganana ny sivilizasiôna voalohany. Irak dia firenena iray manankarena tokoa ao
Fotoana tsara indrindra hitrandrahana sy hitsidika Irak
Febroary 11, 2020 Demi Irak, Travel
NY Fotoam-pitiavana INDRINDRA ARAKA NY FAMPISEHOANA ARY IRAQ IRAQ dia tonga any Etazonia ary AOTUMN, ANDRIAMANITRA DIA NATAO NY FAHASALAMANA SY NY ZAN'OLAKA. Ny faramparan'ny volana Mey ka hatramin'ny voalohandohan'ny volana septambra dia mafana sy maina any Irak, ary ny hafanana mihoatra ny 40 ° C. amin'ny